DEG-DEG: Kabtanka Manchester United Ee Harry Maguire Oo Xabsiga Loo Taxaabay & Red Devils Oo Ka Hadashay - Gool24.Net
DEG-DEG: Kabtanka Manchester United Ee Harry Maguire Oo Xabsiga Loo Taxaabay & Red Devils Oo Ka Hadashay
Wararka ka imanaya waddanka Giriigga ayaa sheegaya in xabsiga loo taxaabay kabtanka kooxda kubadda cagta Manchester United ee Harry Maguire oo dalkaas fasax ku jooga.
Maguire ayaa ayaa ku lug yeeshay isku-dhac dagaal ah, waxaana hadda uu si dhow ula shaqaynayaa ciidamada booliksa Giriiga oo baadhitaanno ku samaynaya kiiskan.
Laacibkan ayaa lagu xidhay jasiiradda Mykonos oo ay fasax ku tageen isaga iyo xaaskiisa, waxaase halkaas ku qabsatay arrin aanu qorshaha kusii darsanin, kaddib markii uu galay dagaal gacan ka hadal ah oo sababay in ciidamada boolisku ay xidhaan.
Harry Maguire ayaa go’aansaday inuu niyad-jabkii semi-finalka Europa League ee kasoo gaadhay Sevilla uu iskaga soo maydhow jasiiradda Mykons oo ay ula safreen xaaskiisa iyo asxaabtiisa khaadka ah.
Manchester United ayaa war-saxaafadeed kasoo saartay xadhigga kabtankeeda Harry Maguire, waxaanay xaqiijisay in habeenkii xalay uu ku lug yeeshay dhacdo, laakiin uu waqtigan si buuxda ula shaqaynayo masuuliyiinta dalkaas, waxaanay tidhi: “Kooxdu waxay ka war qabtaa in Harry Maguire uu ku lug yeeshay fal ka dhacay Mykonos habeenkii xalay. Xidhiidh ayaanu la samaynay Harry, waxaanu si buuxda ula shaqaynayaa masuuliyiinta Giriiga. Waqtigan ma bixinayno wax faahfaahin ah.”
Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa ciyaartoyda kooxdiisa siiyey fasax laba toddobaad ah markii ay Sevilla ka reebtay tartanka Europa League, waxaanu ciyaartoy kastaa la midoobay qoyskiisa, iyadoo uu Maguire doortay in qoyskiisa iyo asxaabtiisa ay waqti nasasho ah kusoo wada qaataan Guriiga ka hor inta aanay kusoo laabanin tababarka ay ugu diyaar-garoobayaan horyaalka Premier League.
Ciyaartoyda ayaa fasaxoodu yahay mid xaddidan oo ay tegi karayaan waddamo kooban maadaama dawladda UK ay soo rogtay xayiraado dhinaca safarka ah oo dadka ka yimaadda dalalka qaarkood la gelinayo 14 maalmood oo karantiil ah marka ay waddanka kusoo labataan. Giriiga ayaan ku jirin liiska waddamada xayiraadaha la saaray, waana sababta uu Maguire u doortay.
Manchester United waxay filaysaa in horraanta bisha September ay ciyaartoygeedu kusoo laabtaan xarunta tababarka Carrington si ay iskugu diyaariyaan xili ciyaareedka cusub oo ay ku furanayaan Burnley oo ay ugu tegi doonaan Turf Moor.